» कोरोनाले फेरियो घरेलु हिंसाको रुप
कोरोनाले फेरियो घरेलु हिंसाको रुप
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १३:३७
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि पारिवारिक झैझगडाका मुद्दा लिएर आउनेको भीड हुने गर्थ्यो। तर, लकडाउन सुरु भएसँगै मुद्दाको चाप शून्यमा झरेको छ। हिंसालगायत घटना नभएरै शून्यमा झरे या समय, परिस्थितिका कारण सबै चुप लाग्ने स्थितिमा पुगे भन्ने अन्योल छ।
कचनकवल गाउँपालिका उपप्रमुख निम्सरी राजवंशी भन्छिन्, ‘उजुरी परेका छैनन्। तर, समाजमा हिंसा नै भएको छैन भन्नचाहिँ सकिँदैन। कहाँ जानु ? कसरी निस्किनु उनीहरूमा अन्योल छ। पुरुष त घरबाट कुनै न कुनै बहानामा बाहिर हिँडेका छन्। महिला हत्तपत्त निस्किने वातावरण मिल्दैन। उनीहरूको घरभित्र के भइराखेको छ ? भन्ने कुरा खोजी गर्दै हिँड्ने अवस्था पनि छैन।
पीडितलाई माध्यम के छ अहिले ? कहाँ जाने आफ्नो दुःख भन्ने पनि हुन्छ। अर्कोतिर पुलिसदेखि स्थानीय तहसम्म सबै कोरोनातिर लागेपछि सामाजिक अवस्थातिर ध्यान भने पक्कै कम भएको छ। उनी भन्छिन्, ‘कतिपय ठाउँमा अनुगमनमा हिँड्दा पनि अनौपचारिक रूपमा हिंसासम्बन्धी घरेलु झैझगडा मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ।’
प्रहरीतिर के छ ?
झगडा भयो भनेर श्रीमान्/श्रीमतीको उजुरीको चाङ दैनिक लाग्ने गर्थे। अहिले ठाडो उजुरी पनि पर्न छाडेको अवस्था छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डित बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विपत्तिमा समझदारीको वातावरण पनि बनेको हुन सक्छ। पहिला श्रीमान् काम गर्न जाने उतै रक्सी खाएर आउने गर्नाले पनि कुटपिटका कुरा आउँथे। सबै परिवार जतिबेलै सँगै हुँदा त्यस्ता खालका घटना पनि हुन पाएनन्। दैनिक ५ वटासम्म घरेलु हिंसाका घटना लिएर आउँथे। अहिले त्यो ठप्प छ।’
अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।